Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara ny Cospn 2 Atsinanana N1B vehivavy rehefa nandresy ny Mb2All Analamanga 58-53 teo amin’ny lalao famaranana, sy ny Mb2All Analamanga U 20 zatovolahy nandavo an’ny Ascb Boeny 91-84 teo amin’ny famaranana. Nitana ny laharana faha-3 kosa teo amin’ny N1 B vehivavy ny Crjs Atsinanana nandresy ny Serasera Vakinankaratra 61-46. Teo amin’ny U 20 zatovolahy kosa ny 2bc Analanjirofo nandavo ny Serasera Vakinankaratra 58-55. Nanohana sy nanolotra amboara sy fanomezana samihafa toy ny mahazatra ny Telma tamin’ity fifaninanana ity.
Efa manangasanga any kosa ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 eo amin’ity taranja ity dingana voalohany sokajy N1A lahy sy vavy izay hotontosaina any Antsiranana ny 18-26 mey 2019.